सोमबार यी पाँच काम गर्दा मनो`कां`क्षा पूरा हुने वि`श्वास !! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Religious/सोमबार यी पाँच काम गर्दा मनो`कां`क्षा पूरा हुने वि`श्वास !!
सोमबार धेरै नारीहरु व्रत बस्छन् । सोमबारको व्रत बस्नाले मनोकांक्षा पूरा हुने विश्वा`स गरिन्छ । सोमबारको दिन देवताको पनि देवता आरध्यदेव महादेवको पूजा गरिन्छ ।`अवि`वाहित नारीले सुयोग्य बर तथा विवा`हिताले पतिको दीर्घायूको कामना सहित भगवान शि`वको पूजा आर` धना गरिन्छ ।
यो दिन सेतो रंगको कपडा लगाउने र सेतै रंगको वस्तुहरुको दान गरेमा विशेष फल प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास छ ।सोमबारका दिन भगवान शिवप्रति समर्पित भई शिव स्तोत्र, रु`द्राक्ष, बेल पत्ताको पूजा गर्नाले भगवान शिव प्रशन्न हुन्छन् भन्ने विश्वास गरिन्छ ।भगवान शिवप्रति श्रद्धाभाव राख्दै निम्न पाँच काम गर्नाले मनोकांक्षा पूरा हुने विश्वास गरिन्छ ।
यसरी उत्पत्ति भएको थियो श्री पशुपतिनाथको मन्दिर !!